Banyere Onyonyo: Ebe Kachasị Mma na Ebe Nweta Nke 2019 | Site na Linux
Ebe nchekwa ihe ntanetị dị n'ịntanetị bụ naanị ụlọ nkwakọba ihe, ụlọ ahịa akwụkwọ, ebe nchekwa nke foto, eserese, eserese, ya bụ, onyonyo, n'ozuzu. Ndị a na-abụkarị faịlụ nrụtụ aka ma ọ bụ mmalite maka ọtụtụ ọrụ, ebe ọ bụ na ugbu a na ụkpụrụ, ha na-enye ohere nke mbipụta, nyocha na nbudata, n'efu ma ọ bụ maka ego, ọtụtụ nde onyonyo nke ndị ọrụ nke ụwa niile.
Isi ojiji ha ma obu ebumnuche ha bụ na enwere ike iji ha dị ka ndị na-enye ihe onyonyo maka ntụzigharị edezi na ọdịnaya ọdịnaya., na ntanetị ma ọ bụ na ọ bụghị, ma ọ bụ na dijitalụ dijitalụ dị ka weebụsaịtị na blog, yana mbipụta mgbasa ozi dịka magazin, akwụkwọ akụkọ, n'etiti mgbasa ozi ma ọ bụ usoro ndị ọzọ.
Imirikiti ụlọ akụ ihe oyiyi taa na-azụ ma ọ bụ nweta ma nọrọ n'ụlọ n'efu ma ọ bụ na ọnọdụ, ihe oyiyi nke ndị nwe ma ọ bụ ndị okike (foto, omenka, otu). Ma n'otu oge ahụ, na usoro a, ha na-enweta kpam kpam ma ọ bụ akụkụ ụfọdụ ikike nke mmeputakwa na ojiji nke ihe oyiyi a kapịrị ọnụ. Iji mechaa nweta ha kpamkpam, na mmachi ma ọ bụ site na ịkwụ ụgwọ, maka ndị ọbịa gị, ndị ọrụ ma ọ bụ ndị otu gị.
1 Banks Image kacha mma maka 2019
1.1 Bankslọ akụ kachasị mma na n'efu
1.3 Nyocha CC
1.5 Foto ndị dị na ngalaba
1.7 Ihe osise efu
1.8 Ihe oyiyi efu
1.12 Banyere ụlọ akụ ihe oyiyi ndị ọzọ bara uru ma ama
1.13 Ihe Nchọta Foto
Banks Image kacha mma maka 2019
Bankslọ akụ kachasị mma na n'efu
Taa, enwere ọtụtụ ụlọ akụ ihe oyiyi na ntanetịFọdụ anọwo na ahịa ruo ogologo oge, ndị ọzọ na-adịbeghị anya. Fọdụ bụ naanị site n’otu ụdị onyonyo, ndị ọzọ nwere ole ma ole ma ọ bụ ọtụtụ edemede dị. Ndị ọzọ bụ naanị onyonyo na anaghị akwụ ụgwọ, ndị ọzọ na-enye naanị onyonyo n’elu ịkwụ ụgwọ, ndị ọzọ nwere ọnọdụ abụọ.
Nke a bụ ezigbo ndepụta nke ụlọ akụ na - akwụghị ụgwọ ma na - akwụghị ụgwọ:
wupu Ọ bụ saịtị na Bekee na Portuguese. Choo ihe onyonyo site na iji usoro okwu. Weta obere onyonyo ma ọ bụ nkewa site na "Otu ndị ama ama" na "Nchịkọta". Ọ chọghị ndebanye aha iji ọrụ ahụ, ihe onyonyo ya niile bụ maka ọhaneze na n'efu. Ọ bụ saịtị nke ndị na-ese foto 2 nke Canada mepụtara, na-enye saịtị zuru oke nke foto dị elu sitere na foto dị iche iche gburugburu ụwa.
Nyocha CC Ọ bụ naanị saịtị Bekee. Choo ihe oyiyi site na iji usoro okwu Ọ naghị eweta otu onyonyo ma ọ bụ nkewa dị iche iche mana o nwere nzacha ọchụchọ nke gụnyere "ụdị ikike", "saịtị isi mmalite" na "onye okike". Ọ chọghị ndebanye aha iji ọrụ ahụ, ihe onyonyo ya niile bụ maka ọhaneze na n'efu. Ọ bụ saịtị nke Creative Commons nzukọ dabere na USA. Ọ na-arụsi ọrụ ike ochie interface ka.
Foter Ọ bụ naanị saịtị Bekee. Choo ihe oyiyi site na iji usoro okwu Ọ na-ewetara ole na ole dị iche iche nke ihe oyiyi ma ọ bụ nhazi ọkwa site «Categories». Ọ chọghị ndebanye aha iji ọrụ ahụ, ihe onyonyo ya niile bụ maka ọhaneze na n'efu. Ọ bụ saịtị dị na USA, nke na-enye saịtị zuru oke na onyogho dị mma na mkpebi atọ dị iche iche atọ.
Foto ndị dị na ngalaba
Foto ndị dị na ngalaba bụ saịtị nwere ọtụtụ asụsụ gụnyere Spanish. Choo ihe onyonyo site na iji usoro okwu. Ọ na-ewetara ọtụtụ otu onyonyo ma ọ bụ nkewa site na “Categories” ma ọ bụ «Ngalaba». Ọ chọghị ndebanye aha iji ọrụ ahụ, ihe onyonyo ya niile bụ maka ọhaneze na n'efu. Ọ bụ saịtị na-adabere na England, nke na-enye ọtụtụ ihe oyiyi dị iche iche na-akwụghị ụgwọ dị mma ma na mkpebi ka mma maka ịkwụ ụgwọ.
PngImg Ọ bụ naanị saịtị Bekee. Choo ihe oyiyi site na iji usoro okwu Ọ na-ewetara ọtụtụ otu onyonyo ma ọ bụ nkewa site na “Otu” na «Ngalaba». Ọ chọghị ndebanye aha iji ọrụ ahụ, ihe onyonyo ya niile bụ maka ọhaneze na n'efu. Ọ bụ saịtị na-enye ọtụtụ ihe onyonyo n'efu na clipart nke ezigbo mma mana naanị na .png usoro, ọkachasị maka imewe weebụ yana imewe n'ozuzu.
Ihe osise efu
Ihe osise efu Ọ bụ saịtị nwere ọtụtụ asụsụ na-anaghị agụnye Spanish. O kweghi icho onyonyo n'iji usoro okwu. Weta ọnụọgụ dị mma nke otu onyonyo ma ọ bụ nkewa site na “Otu”. Ọ chọghị ndebanye aha iji ọrụ ahụ, yana onyonyo ya niile bụ n'efu yana ojiji ọha na eze. Ọ bụ saịtị dabere na Russia, nke na-enye ọtụtụ ihe oyiyi dị iche iche na-akwụghị ụgwọ dị oke mma ma mara oke mma.
Ihe oyiyi efu
Ihe oyiyi efu bụ saịtị nwere ọtụtụ asụsụ gụnyere Spanish. Choo ihe onyonyo site na iji usoro okwu. Ọ na - eweta ọnụọgụ dị mma nke otu onyonyo ma ọ bụ nkewa site na “Otu” na «Ngalaba». Ọ chọghị ndebanye aha iji ọrụ ahụ, ihe onyonyo ya niile bụ maka ọhaneze na n'efu. Ọ bụ saịtị dị na USA, nke na-enye ọtụtụ ihe oyiyi dị iche iche na-enweghị atụ nke ezigbo mma yana na mkpebi 5 dị iche iche akọwapụtara.
Freepik Ọ bụ saịtị na Spanish. Chọọ ihe onyonyo, ihe ntanetị, foto ngwaahịa, faịlụ PSD na Oyiyi site na iji usoro okwu. Ọ na - eweta ọnụọgụ dị mma nke otu onyonyo ma ọ bụ nkewa site na “Otu” na «Ọchụchọ mara mma». Ọchọghị ndebanye iji ọrụ ahụ, yana onyonyo ya bụ n'efu yana ojiji ọha na eze ma kwụọ ụgwọ maka ọrụ adịchaghị. Ọ bụ saịtị dị na US, nke na-enye ọtụtụ dịgasị iche iche na ezigbo mma.
Gratisography Ọ bụ saịtị na Spanish. Choo ihe onyonyo site na iji usoro okwu. Ọ na-ewetara obere ego nke otu onyonyo ma ọ bụ nkewa site «Atiya». Ọchọghị ndebanye iji ọrụ ahụ, yana onyonyo ya bụ n'efu yana ojiji ọha na eze ma kwụọ ụgwọ maka ọrụ adịchaghị. Ọ bụ saịtị dabere na US, nke ugbu a anaghị enye ọtụtụ dịgasị iche iche yana onyonyo dị na-abịa naanị na mkpebi akọwapụtara.
Kaboompics Ọ bụ saịtị na Bekee. Choo ihe onyonyo site na iji usoro okwu. Ọ na-eweta ọnụọgụ dị iche iche nke onyonyo ma ọ bụ nkewa site na "Ngalaba" ma nwee nzacha site na "Otu". Chọghị ndebanye iji ọrụ ahụ, ihe onyonyo gị bụ n'efu na ojiji ọha. Ọ bụ saịtị dabere na US, nke ugbu a naanị na-ahapụ gị ibudata onyonyo dị na 2 predefined amuma na otu customizable.
Banyere ụlọ akụ ihe oyiyi ndị ọzọ bara uru ma ama
Nke a bụ ndepụta ndị ọzọ nke saịtị Bank Image ndị ọzọ na-adọrọ mmasị ịchọ, gaa na ịchọpụta:
Foto nkwụnye ego
Foto Nri efu
Ụlọ akụ Freemage
Enwerego m onwe m
Oghere Dị Mkpa
Ihe Nchọta Foto
E nwere saịtị ndị na-abụghị ezigbo Banlọ akụ Image mana ha bụ ndị na-enyocha onyonyo dị na Banks Image. N'ime ha bụ:
O doro anya na ụlọ akụ na-enye anyị nnukwu uru, karịsịa maka ndị ọkachamara chọrọ na ọrụ anyị, isiokwu ma ọ bụ ọdịnaya multimedia iji iji ihe oyiyi mee ihe, n'efu na n'efu ma ọ bụ na enweghị ụgwọ.
Ebe ọ bụ na n'agbanyeghị ihe anyị na-emepe ma ọ bụ na-edezi, mkpa kwa ụbọchị maka ihe oyiyi ọhụrụ, na-eme ka saịtị ndị a bụrụ ezigbo ebe iji chọta ihe metụtara isiokwu anyị, na uru agbakwunyere na ọtụtụ n'ime ndị a, n'agbanyeghị ịbụ ndị nweere onwe ha na ndị nweere onwe ha, dị oke mma ma bụrụ nke ndị ọkachamara mere, nke na-enye anyị ohere iju ndị na-agụ akwụkwọ anyị, ndị ahịa ma ọ bụ ndị ọrụ nwere ọdịnaya anyị na ngwaahịa ejiri ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ » Banyere Onyonyo: Ebe kachasị mma na n'efu na 2019
I meela nke ukwuu daalụ! M na-arụ ọrụ na vidiyo ma achọta m saịtị a nke m hụrụ n'anya kpamkpam n'efu, a na-akpọ ya https://Gifing.com, ọ nwere ọdịnaya dị iche iche na ndị na-eme ihe nkiri na usoro kwụ ọtọ maka netwọkụ mmekọrịta, ejirila m ya ọtụtụ, nwee olileanya ya ga-enyere gị aka
Zaghachi Alex Polo
Daalụ Alex! Daalụ maka okwu gị. Banyere vidiyo abụghị ọtụtụ amaara, yabụ onyinye dị oke mma.
ROSA Enterprise Desktọpụ X4 bịarutere na Kernel 4.15, KDE4 na ndị ọzọ